iPad Pro VS Microsoft Surface, mitovy nefa tsy mitovy | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | fifaninanana, iPad Pro
Ny iPad Pro dia tonga nifaninana tamin'ny Microsoft Surface. Izy ireo dia fitaovana roa aparitaka izay mamaly ny filàna mitovy ary mikendry ny mpijery iray ihany, ireo izay mitady portability ambony indrindra nefa manana hery ampy hahafahana manao asa amin'ny sehatra matihanina. Saingy na eo aza ny fitoviana ara-batana sy ny zava-misy fa toa mitovy tanteraka ny zava-bitany, dia miharihary tokoa ny fahasamihafana., mazàna satria ny rafitra fiasanao dia. Ao amin'ny The Verge dia nampitaha ny takelaka matihanina izy ireo ary ny fehin-kevitra notsoahany dia tena mahaliana.
Ireo fitaovana roa ireo dia takelaka lehibe mifandrindra amin'ny fampiasana azy amin'ny klavie sy ny stila. Ny Microsoft Surface dia ahitana ny pensilihazo eo amin'ireo kojakoja izay tonga ao anaty boaty, raha ny Apple Pencil kosa dia tsy maintsy vidiana misaraka. Ireo fitaovana roa ireo dia samy manana kitendry ho fanampiny izay tsy maintsy vidinao, na dia foto-tsakafo ampiasaina aza. Ny priori miaraka amin'ireo kojakoja rehetra ireo dia afaka manao zavatra mitovy ny fitaovana roa, fa ny fomba fanaovany azy dia samy hafa be amin'ny iray sy ny iray hafa.
Amin'ny fampitahana dia manizingizina izy ireo fa ny Surface amin'ny ankapobeny dia laptop, fa ny iPad Pro kosa dia takelaka, ary izany dia aseho amin'ny rafitra fiasan'izy ireo. Microsoft Surface dia mitondra Windows 10, rafitra miasa amin'ny birao izay manana ny lesoka raha ny amin'ny fampiasana ilay fitaovana ho takelaka. Ny iPad Pro dia mampiasa ny iOS 9, izay midika fa ny rindranasa rehetra dia namboarina mba hampiasaina amin'ny efijery iray, ary manana ny katalaogin'ny App Store be dia be koa ianao, saingy misy fatiantoka io: maro ny "Pro" application no tsy natao hampiasaina amin'ny fitaovana finday. Ny ohatra manasokajy indrindra dia ny Adobe Photoshop, izay hita eo amin'ny Surface amin'ny endriny birao feno mety, ary amin'ny iPad Pro kosa dia rindrambaiko finday mitovy amin'ny iPad "" normal "no ampiasaina. Tombony sa fatiantoka? Miankina amin'ny fampiasana ny tsirairay izany.
Ny fampitahana dia mifantoka amin'ny pen nomerika isaky ny takelaka roa. Ny Apple Pencil dia mivoaka ho mpandresy amin'ny fananana mpanoratra sy sary voajanahary kokoa ary koa amin'ny haitao fandavana palma tena tsara, mahafeno azy ho penina nomerika tsara indrindra nampiasain'izy ireo. Ny lokon'ny Microsoft Surface dia tsy ratsy velively, saingy somary taraiky aoriana kely amin'ireo lafiny ireo. Ny maharesy azy dia ny fananany "esotra" eo an-tampony, toy ny pensilihazo misy soloina, izay lazain'izy ireo fa tsy hita ao amin'ny Apple Pencil. Mamela antsipiriany maro hafa mahaliana antsika ny horonan-tsary, noho izany mamporisika anao izahay hijery fa mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » iPad Pro VS Microsoft Surface, mitovy nefa tsy mitovy
Cristian Guzman Sandoval dia hoy izy:
Ny tena maha samy hafa azy dia ny Surface dia tsara kokoa noho ny media sosialy, iMessage, na lalao tsotra fotsiny. iPad Pro tsy hanolo ny fampiasana PC toa ny Surface. Apple dia diso toerana miaraka amin'io vokatra io
Valiny tamin'i Cristian Guzman Sandoval
Loliman dia hoy izy:
Manana baolina toradroa ianao. Jereo fa tiako ny vokatra Apple (manana maromaro aho) ary Windows (toy ny rafitra miasa) dia tsy manohana azy aho (mpampiasa Linux aho; OpenSuse, Arch ary Fedora, marina), fa hoy ianao fa Windows 10 dia ny rafitra fiasa miaraka amin'ireo lesony (toa tsy nananan'ireo iOS izy ireo, nefa azo antoka fa ilay OS misy faran'izay bitika indrindra) no mololo farany. Avy eo ianao milaza fa ny iPad Pro dia manomboka amin'ny tombony amin'ny fananana ny katalaogin'ny fampiharana iOS manontolo. xDDDD Ary ny katalaogy Windows dia azo isaina amin'ny rantsan-tanan'ny tanana, sa tsy izany? Mazava fa ny rindranasa iOS rehetra dia natao ho an'ny fitaovana mikasika, fa amin'ny Windows dia maro ireo efa namboarina ary taona vitsivitsy alohan'ireo mpifaninana aminy ao amin'ny iOS. Amin'ny sary sy sary dia manana Clip Studio Paint ianao (averiko indray fa ampifanarahana amin'ny interface interface izy io), ary ireo izay manokan-tena hanao sary dia hahafantatra fa ny Procreate (ny sora-baventy misy sary amin'ny iOS) dia tsy mahatratra ny hahavon'ny flip flip akory . Amin'ny famokarana mozika dia misy ny kinovan'ny FL Studio feno endrika volavola (ny kinova iOS dia toy ny trano mimanda miaraka amin'ny rindrina misavoritaka sy tsy mahazo aina novidiana avy amin'ireo mpamorona Music Studio), misy ihany koa BitWig na Presonus, izay miasa ihany koa . Ny fampiharana tokana miavaka amin'ny iOS dia Cubasis (kinova kely an'ny Windows Cubase). Raha manisa ny fetran'ny InterApp-Audio amin'ny iOS ihany koa isika dia tsy tokony horesahina.
Amin'izany rehetra izany dia tokony ampidirintsika ny rindranasa birao rehetra izay fari-pahaizana amin'ny sehatra rehetra, ary indrisy, ho an'ny Windows ihany no misy. Avia, aza manandrana mivarotra bisikileta amin'ny olona hafa, satria toy ny mpankafy mihemotra ianao.
Valiny tamin'i Loliman
Ny fanatisme tsy mitaredretra dia ilay manompa olona hafa noho ny tsy fisainany toa azy. Tsy mbola nanao an'izany isika.
Ny iPhone 7 Plus dia hanana RAM 3GB sy tranga tsy misy rano [RUMOR]
Fitsapana Apple Stores dia mangalatra Apple Pencils